ATTO XstreamCORE® 7550 sy 7600 Izao dia voamarina VMware Vonona - NAB Show News avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcast ofisialy NAB Show - NAB Show LIVE
Home » Featured » ATTO XstreamCORE® 7550 sy 7600 Izao dia voamarina ny VMware Vonona
ATTO XstreamCORE® 7550 sy 7600 Izao dia voamarina ny VMware Vonona
Rehefa lasa mpamokatra serivisy fitahirizana izy io. Atto Technology, Inc. dia nanolotra vahaolana avo lenta farany sy vokatra ho mora kokoa hitahiry, hitantana ary hanaterana angon-drakitra. Ny orinasa dia nanjaka tamin'ny maha-mpitarika manerantany ny IT sy ny haino aman-jery sy ny fialamboly nanomboka tamin'ny 1988, tamin'ny fametrahana tamba-jotra mahomby sy fitahirizana angon-drakitra. Mbola tsy nahomby tamin'ny fanomezana vahaolana iraisan'ny fotodrafitrasa ho an'ny tontolo informatika mivaingana indrindra. Ankehitriny, miaraka amin'ny vao haingana Fanambarana VMware, dia hitohy hamaky ny fetra fitehirizana data vaovao amin'ny vidiny mora kokoa.
Inona ny sata VMware Vonona ™ ho an'ny ATTO
Ny fanambarana dia avy amin'ny AMHERST, NY, ny alatsinainy faha-8 Aogositra 26, nilaza fa ny ATTO XstreamCORE® FC 7550 ary 7600 Nahomby ny tetezana protocole vita VMware Ready ™. Ny programa VMware Vonona dia avo fananganana ambony indrindra amin'ny VMware, ary miasa ho tombony amin'ny fanomezana tombony amin'ny Programme Alliance Alliance Partner (TAP). Ny fananana programa dia ahafahan'ny mpanjifa ATTO mora mamantatra ireo vokatra mpiara-miasa voamarina fa hiasa amin'ny fotodrafitrasa rahona VMware. Io dia mamela ny mpanjifa hampiasa ireo vokatra sy vahaolana ireo hampihenana ny loza amin'ny tetikasa ary mahatsapa ny fitahirizana ny vidin'ny vahaolana voaorina namboarina.
ATTO XstreamCORE FC 7550 sy 7600
Satria ny tetezana protocol vita amin'ny ATTO XstreamCORE FC 7550 sy ny 7600 dia afaka manova ny fitehirizana SAS mivantana misy ao anaty fitehirizana fantsom-pamokarana mavesatra, izany dia ahafahan'ny mpitantana IT mamolavola tambajotra fitehirizana fampirimana be dia be (SAN) haingana sy lafo kokoa. - fenitra mavitrika, izay azo tanterahana ihany amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ny fitahirizana SAS mivantana hatrany amin'ny 64 ara-batana ara-batana. Ny fananana VMware Vonona ™ dia mahomby amin'ny fanatrarana fahafaham-po bebe kokoa amin'ny mpanjifa, raha toa ka miasa toy ny fomba fandrosoana ho an'ny ATTO hampiroborobo ny fahombiazan'ny teknolojia amin'ny vokatra azony izy.
Manadihady lalindalina kokoa amin'ny lafin-javatra famoronana XstreamCORE, talen'ny varotra amin'ny sehatry ny marketing amin'ny ATTO Technology, Tom Kolniak Tsy afaka nilaza izany tsara kokoa izy raha nilaza izy hoe "Mora ny mandoko ny tenanao ao amin'ny zoro IT tsy misy safidy azo ampiharina amin'ny fanitarana ary, amin'ny tranga maro, ny fanavaozana forklift no hany làlana tokana." Dia nanohy ihany koa i Tom "XstreamCORE no vahaolana azo ampiharina amin'ity toe-javatra ity. Ohatra, ny rafitry ny mpizara namboarina tamin'ny mpizara blade dia afaka miala amin'ny fetran'ny fitahirizana azy amin'ny alàlan'ny fampidirana ny XstreamCORE fotsiny. ”
Ankoatra ny teknolojia ATTO ATTO XstreamCORE FC 7550 sy 7600, ny ATTO dia manamboatra vokatra ihany koa:
Mpanamboatra mpandray anjara
Tao anatin'ny telopolo taona hatramin'ny nivoahan'ny ATTO teo amin'ny sehatra teknolojia, ny teny filamatra nataony dia ny "The Power Behind the Storage," amin'ny fampisehoana bebe kokoa ny fampitana fifandraisana avo lenta amin'ireo fifandraisana fitahirizana rehetra, izay nahitana ny Fibre Channel, SAS, SATA, iSCSI, Ethernet, NVMe ary Thunderbolt. Ankehitriny, ny XstreamCORE FC 7550 sy 7600 dia nahatratra ny toeran'ny VMware Ready ™, azo antoka fa hiaina an'io slogan io.
Raha tianao ny hahafantatra bebe kokoa momba Atto Technology, Inc. ary aiza no hahitana azy kitiho eto mitsidika ny Fifanakalozana VMware Solution (VSX), tsenan-tserasera an-tserasera izay ahafahan'ny mpiara-miasa sy mpamorona VMware hamoaka votoaty marketing feno sy rindrambaiko azo alaina ho an'ny mpanjifantsika.
ATTO ATTO Technology ATTO XstreamCORE® FC ATTO XstreamCORE® FC 7550 sy 7600 HOAN'NY FOR-A, rafitra vitsivitsy, tetezana protocol Spears & Arrows Storage Programme Alliance Alliance Partner (TAP) Variant Systems	2019-08-27
Previous: Ny RT Software dia manara-penitra amin'ny Solika AJA I / O ho an'ny Playout Graphics azo antoka sy azo itokisana
Next: Apantac Mampiseho ny KVM amin'ny IP amin'ny IBC2019